EA053 - Inzwa Yokunyakaza Ye-Pir Infrared (I-Support Mp3 Sound) - Izixazululo ze-OMG
Lo mdlali wamukela ubuchwepheshe besimiso se-infrared pyroelectric induction. Uma abantu befaka uhla oluzwelayo, luzodlala umsindo. Amafayela omsindo angashintshwa nguwe. Ungawaguqula kanjani amafayela omsindo? Ine-interface encane ye-USB, exhunywe kwikhompyutha ngekhebula ledatha le-USB. Bese ukopisha amafayela womsindo we-MP3 kusuka kukhompyutha uye kulesi sidlali. Kulula kakhulu.
Ukutholwa kwenzwa yokuhamba kwe-infrared.
Amafayela womsindo azodlala ngokuzenzakalelayo ngemuva kokuthi inzwa ye-PIR ithole abantu.
Sekela noma yikuphi ukudlala kwefayili yomsindo we-MP3, ithrekhi eyodwa noma ukudlala ngokulandelana.
Wakhelwe kwimemori ye-flash engu-32Mbit (4MB).
Sekela ukufaka izwi, landa amafayela omsindo ekhompyutheni ngentambo yedatha ye-USB.
Isikhombimsebenzisi se-Micro USB: ukusekela i-adaptha yamandla engu-5V DC; umsebenzi wokudlulisa idatha
Izindlela ezimbili zokunikeza amandla: 3 amabhethri owomile noma amandla we-usb.
Wakhelwe ku-29mm 8O1 watt speaker.
Ivolumu iyakwazi ukuguquguqulwa
Ukuhlinzekwa kwamandla: Amandla we-DC 5 yangaphandle noma amabhethri womile ama-3pcs (DC4.5V)
Ukusebenza kwamanje: isimo sokulinda = 120uA, izwe lokudlala = 200mA
Ifomethi yomsindo: MP3, isilinganiso sesampula: 44.1Khz / 320Kbps
Amandla okuphuma komsindo: 8O / 1W
Ibanga lezinzwa le-infrared: = 4m (angle engu-45)
Ukushisa okusebenzayo: -10 ~ 35?
Umswakama osebenzayo: 10 ~ 85% RH
Ivolumu (umsindo wokudlala): 90dB
Udonga oluseceleni lufakiwe: Isisindo sokufaka sifinyelela kumamitha ayi-1.5 ngaphezu komhlaba. Kungcono kakhulu ukuthi inzwa yenze ama-angle angama-45 ngomhlaba.
Kufakwe amakhethini: Cishe amamitha amathathu ngaphezulu komhlaba angcono kakhulu. Isensor kufanele ifane nophahla.
Ukubuka okuphelele kwe-7570 Ukubuka kwe-2 Namuhla